Soomaaliyaynta Cudurka (Autism)ka | Oodweynenews.com , Oodweyne News, OODWEYNENEWS
Soomaaliyaynta Cudurka (Autism)ka
Nabad akhristayaal dhammaantiin. Bariidadaasi kaddib, waxan shalay oo ay taariikhdu ahayd; 22kii Sibtambar, 2017kii ka daawaday mareegta Oodweynenews barnaamij ay ka soo xigatay (Universal TV). Barnaamijkaasi oo ku saabsanaa, cudurka afka qalaad loo yaqaanno (Autism)ka.
Wuxu wariyaha barnaamijku waraysi xiise leh la yeeshay, saddex ka mid ah waalidiinta Soomaaliyeed oo haysta laba wiil oo la nool xanuunkaasi aynnu korka ku soo sheegnay. Waraysiguna wuxu ka dhacay, magaalada Bristol ee carriga Ingiriiska.
Haddaba, waxa i soo jiitey:
barnaamijka oo xiiso lahaa
Iyo waalidiinta la waraystay oo ay ka muuqatay: kalsooni, aqoon iyo hadalkooda oo fasiix ahaa!
Haddaba waxa ujeedada maqaalkaygana tahay, ka qaybqaadashada qaadhaan figradeedka (contribution) uu wariyuhu codsaday oo ahayd; in ereybixin afsoomaali ah loo raadiyo xanuunkan (Autism)ka.
Inkasta oo aanan aqoon dhakhtarnimo lahayn, isla markaasina aanan waayo-arag u ahayn cid cudurkan qabta oo ay ereybixinta cudurkani ku fiicnayd; in ay ka timaado dhinaca bahda caafimaadka, haddana waxan isku dayey; in aan figradayda ka dhiibto – anaga oo ka eegaya dhinaca afka Soomaaliga iyo tii dhaqanba.
Waxase marka hore isweydiin leh, hore xanuunkani dadkeenna ma ugu dhici jirey? Mise waa wax innagu cusub oo dhawaan innagu soo kordhay? Ootiisamkuse (autism) ma hadal la’aan kaliyaa mise wuu ka sal ballaadhan yahay?
Akhristayaal, waxa aanu shaki ku jirin; in uu xanuunkani ku dhici jirey dadkeenna sida uu ummadaha kale ee adduunkaba ugu dhaco. Waxase is weydiintu tahay, maxaa beryahan keenay in xoog loo dareemo? Maxaase uu ugu batay wiilasha Soomaaliyeed ee qurbaha ku dhashay? Ma cudur reer galbeedka cuntadoodu kicisaa? Ma tallaalkaa keena? Ma hiddeside(gene) Soomaalida ku jira iyo cimilada reer galbeedkaa col ah?…ma …ma?
Su’aalahaasi jawaabtoodu waxay u taallaa dhakhaatiirta aqoonta u leh xanuunkan!
Haddaba, sida aan ka fahmay wax yar oo aan aqoon ahaan ka bartay; xanuunkani wuu ka gun dheer yahay sida aynnu Soomaali ahaan u qaadanay ee ah wiilal aan hadlin oo aamusay! Waxana uu cudurkani leeyahay laamo fara badan oo uu ka mid yahay xanuunka loo yaqaanno; (Asperger’s syndrome)ku.
Waxase jira astaamo guud oo ay wadaagaan dadka xanuunkani qabaa.
Kuwaasi oo ay ka mid yihiin: qalqaallinimo, hurdo yari, qalo (social anxiety) ay dadka kale ka qaloodaan- gaar ahaan ciddii aanay hore u arki jirin iyo degaanka ku cusubba, moganaan (dhaadid la’aan), tixgelin la’aan, is-ku-kalsooni la’aan iyo wixii la mid ah!
Haddaba, markii aan astaamahaasi iyo kuwo kalaba isku geegeeyey, waxa ii soo baxday; in magaca ugu habboon ee Soomaali ahaan xanuunkan Ootisamka loo bixin karaa yahay …
La soco qormada labaad oo aynnu – haddii Eebbe idmo – ku sheegi doonno magaca iyo sababta aynnu magacaasi u xulanayba!!